Dinika:Anarana - Wikipedia
1 Anarana: Sosonkevitra hanatsarana ny pejy
2 Wikipedian'ny Vavolombelon'i Jehovah
2.1 Tokony ho fafàna ity pejy ity
Anarana: Sosonkevitra hanatsarana ny pejy[hanova ny fango]
Mibahana zato isan-jato ny resaka baiboly sy fivavahana kristiana ka lasa hoatra ny mpampianatra any amin'ny seminery teolojika ny mpanoratra. Izao no sosonkevitra hanatsarana ny pejy:
Voalohany[hanova ny fango]
Soloina ny lohateny ka atao sahalahala amin'izao : "Anarana ao amin'ny Baiboly" na "Anarana arakany Baiboly". Tsy mandiso fanatenana ny tsy liana amin'ny fandalinana momba ny fivavahana izy amin'izay. Tsara kokoa aza ny manavakavaka ny karazam-pivavahana mampiasa baiboly satria samy manana ny fomba fandraisany azy ireo fivavahana ireo: ny Jiosy, ny Katolika, ny Protestanta, ny Vavolombeon'i Jehovah, sns. Raha toa ka ny fomba fiheverana na ny finoan'ny antokom-pivavahana iray manokana monja no tiana haseho dia tsara raha soratana koa ilay antokom-pivavahana. Ohatra: "Anarana ao amin'ny Baiboly araka ny fiangonana/fikambanana X". Sosonkevitra fotsiny ny ahy.
Faharoa[hanova ny fango]
Tsy soloina ny lohateny fa avela amin'izao nefa avelatra bebe kokoa ny zavatra soratana ka ampanarahina drafitra sahalahala amin'izao: 1- Famaritana tsotra ny hoe "Anarana"
2- Ny anarana amin'ny maha sokajin-teny ao amin'ny fitsipi-pitenenana (Misy zana-pizaràna maro ity. Ohatra: anjara asan'ny anarana ao amin'ny fehezan-teny, ny filazana lahy/vavy, tokana/maro, sns. Tsy ny teny malagasy ihany no horesahina fa ao amin'ireo tenim-pirenena maro hafa koa araka izay tratra)
3- Ny fifandraisan'ny anarana sy ny zavatra tondroiny (semantika na semiotika) Eto no azo asiana ny hevitr'ireo filozofa sy ny lojisianina, ny mpandinika teny (lengista), sns.
4- Ny anarana eo amin'ny fifandraisan'ny samy olombelona (antropolojia) Ato amin'ity no tokony hahitana ny lanjan'ny anarana eo amin'ny fiarahamonina malagasy, sy ny fiarahamonina amin'ny firenena hafa, sns.
5- Ny lanjan'ny anarana eo amin'ny fivavahana samihafa Ato anatin'ity no hahitana ny lanjan'ny anarana eo amin'ny karazam-pivavahana maro araka izay azo atao: kristianina, silamo, bodista, hindo, sns. Ny eo amin'ny fizarana atokana ho an'ny kristianina dia mbola azo zaraina maro araka ny antokom-pinoana samihafa.
Ny safidy voalohany dia moramora kokoa nefa mety hiteraka fitongilana-pijery ka mila fifehezan-tena. Ny safidy faharoa no tena tsara nefa mitaky fahalalana sy fandavan-tena ary asa betsaka dia betsaka. Mirary fahazotoana tompoko. --Ndatyavao (resaka) 22 Novambra 2017 à 06:15 (UTC)
Wikipedian'ny Vavolombelon'i Jehovah[hanova ny fango]
Diso fanantenana aho namaky ilay izy satria nihevitra fa hahitam-pahalalana. Miharihary ny maha-Témoin an'ilay mpanoratra nefa tokony tsy ho fantatra izany.
Hoatra ny hoe nadika tamin'ny boky efa voasoratra ny zavatra hita ao: " ...Ity boky Fandalinana ny Soratra Masina ity kosa mifototra amin’izay lazain’ny Baiboly ..." " ... Nomena arakaraka izay anarana ampiasain’ny Soratra Masina—Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao àry ny dikan’ireny fototeny ireny."
Tokony ho fafàna ity pejy ity[hanova ny fango]
ary tokony harahi-maso ny mpandray anjara toy ireny. Manao kopié-kolé ny zavatra any anaty bokiny na site-web-ny any. Mampietry ny Wiki malagasy ny toy izao. Tokony mba jerena aloha ny zava-misy any amin'ny Wikipedia hafa (Nom, Name, Nombre, ets.) mba hahafantarana ny tokony hosoratana. Mampietry ambany ny Wikipedia malagasy ny toy izany. --Vazimba (resaka) 22 Novambra 2017 à 07:08 (UTC)
Misaotra anato Vazimba nampitandrina antsika momba izany. Tsy azo atao ny mandika avy amina site web ivelany raha tsy nahazoana alalana manao izany. Noho izany tsifanajana zom-pamorona izany dia hofafàna ilay pejy. — Jagwargrr... mailaka 22 Novambra 2017 à 21:56 (UTC)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinika:Anarana&oldid=809032"
Voaova farany tamin'ny 22 Novambra 2017 amin'ny 21:56 ity pejy ity.